ပီကေကြိုက်တဲ့မီးမီးတစ်ယောက် | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး ပီကေကြိုက်တဲ့မီးမီးတစ်ယောက်
အဲ့ဒီတုန်းက ကြည်ပြာနေထိုင်ရာ စင်ကာပူမှာ ည ၁၂ နာရီလောက်အချိန်တောင်ရှိတော့မယ်။ မီးမီးတစ်ယောက် မက်ဆေ့ပို့လာတာ၊ တိုင်ပင်စရာရှိလို့ဆိုပြီး … ရန်ကုန်မှာကတည်းက သူ့အပေါ် ဆိုးနေ နွဲ့နေကျ မီးမီးက ကြည်ပြာ စင်ကာပူရောက်တဲ့ထိလည်း ကိစ္စကြီးငယ်မှန်သမျှ တိုင်ပင်မြဲ .. ။ ခါတိုင်းတော့ ဟိုပြော ဒီပြောဆိုပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ မီးမီးဖြစ်ပုံက နည်းနည်းဆန်းတယ်ပြောရမလား … သူနဲ့ သူ့ကောင်လေးက ချစ်နေကြတာကြာပြီး Lover အဆင့်ရောက်နေကြတဲ့အတွဲ။ သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိနေကြတာပဲ ..
ခုက ဘာဖြစ်လဲဆို သူ့ကောင်လေးက မီးမီးကို Oral Sex ဆိုတဲ့ သူ့လိင်အင်္ဂါကို ပါးစပ်နဲ့ သာယာမှုပေးတဲ့ကိစ္စ လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ မီးမီးအနေနဲ့ကလည်း ချစ်သူကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလံး လိုက်လျောပြီးတာမို့ အဲ့ဒီ ပါးစပ်နဲ့ ကိုလည်း လုပ်ပေးချင်လို့ ကြိုးပမ်းတယ် .. ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေဘူးတဲ့ .. ပြောတာကြည့်ဦး ..
မီးမီး – အစ်မရယ် … မီးတော့ စိတ်ညစ်တာပဲ။ ညီအစ်မတွေလို ချစ်လို့ တိုင်ပင်တာနော်၊ အစ်မများ ကူညီနိုင်မလားလို့ ..
ကြည်ပြာ – ဟဲ့ ပြောပါဦး၊ ဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲ
မီးမီး – သူ့ဟာကို ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးပါတဲ့။ မီးက သူ့ကို အကုန်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ထိလည်း ရည်စူးထားတော့ သူအလိုရှိသမျှပေးဆပ်ပြီးတော့ သူ့ကိုချစ်ခဲ့တာပါ။
ကြည်ပြာ – ပုလွေမှုတ် ပေးခိုင်းတာပေါ့။ အဲ့ဒါဘာစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲ?
မီးမီး – ဟီး အစ်မရယ် .. ဘယ်လိုကြီးလဲကို မသိဘူး။ သူ ဘယ်လောက်ပဲ သေချာ ရေဆေးထားတယ်ပြောပြော .. အဲ့ဟာကြီးကို မျက်နှာနားရောက်လာရင် ဘာနံ့ကြီးမှန်းမသိတာတစ်ခု နှာခေါင်းထဲရပြီး အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ သူကလည်း စိတ်ညစ်ရောပေါ့ … သူစိတ်ညစ်တော့ မီးပါ စိတ်ညစ်ရော …
ကြည်ပြာ – ဖြစ်ရမယ်ဟယ် … ညည်းကလည်း ဖြစ်လိုက်ရင်နော်။ ဟုတ်ပါပြီ။ ပြဿနာရှိရင် ဖြေရှင်းနည်းရှိရမှာပေါ့။ မီးမီး ပီကေကြိုက်လား .. ပီကေနံ့မျိုးကို သဘောကျလား။
မီးမီး – အစ်မရယ် .. ပီကေကြိုက်တာပေါ့။ ပီကေရဲ့ အရသာနဲ့ အနံ့ကို မကြိုက်တဲ့သူဆိုတာ မရှိမှ မရှိတာ …
ကြည်ပြာ – အင်းပါ .. ဒါဆို ဒီတစ်ခေါက် ညည်းတို့နှစ်ယောက် ဟိုတယ်သွားတဲ့အခါ Kiss bubble gum ကွန်ဒုံးကို ဝယ်သွား …
မီးမီး – Kiss bubble gum ကွန်ဒုံး ..?
ကြည်ပြာ – အေး … Kiss bubble gum ကွန်ဒုံးက ပုံမှန်ကွန်ဒုံးတွေနဲ့မတူဘူး။ သူ့မှာပါတဲ့ ပီကေအနံ့က အရမ်းမိုက်တယ်။ Tease က လုံးဝအသစ်ကွာ၊ ပီကေကြိုက်တဲ့ မီး သဘောကျသွားမယ်။ အဲ့ဒီ Kiss bubble gum နဲ့ ညည်းချစ်ချစ်ကြီးရဲ့ဟာကို စွပ်ပြီး ပီကေအမှတ်နဲ့သာ လှုပ်ရှားလိုက်တော့ .. အဆင်ပြေသွားမယ်။
မီးမီး – ဟာ .. အဲ့လို ပီကေအနံ့ အရသာနဲ့ ကွန်ဒုံးရှိတာလား?
ကြည်ပြာ – ရှိတာပေါ့။ Kiss bubble gum တဲ့။ စမ်းကြည့်လိုက် .. အဆင်ပြေသွားမယ်။
မီးမီး – ဟုတ် အစ်မ .. ကျေးဇူးနော် …
အဲ့ဒီနေ့က စပြီး တစ်ပတ်လောက်မှာ မီးမီးဆီက မက်ဆေ့ဝင်လာတယ် .. နှစ်ကြောင်းတည်းရယ်။ “Kiss bubble gum နဲ့ ပုလွေ ကိစ္စ အဆင်ပြေသွားတယ် .. သူလည်းပျော်နေလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မရယ်” တဲ့။